Tobonaan qof oo lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Bay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaTobonaan qof oo lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Bay
December 23, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Ciidamada dowladda. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Tobonaan qof la sheegay in lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Bay oo u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
Weerarka ayaa bilaabmay kadib markii maleeshiyaad katirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xero ay ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya ku leeyihiin deegaanka Goof-guduud ee gobolka Baay subaxnimadii Isniinta.
Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in ku dhawaad 20 maleeshiyo ah oo katirsan Al-Shabaab lagu dilay weerarkaas.
Dhanka kale, dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in ilaa 7 askari oo katirsan ciidanka dowladda lagu dilay weerarka.
Goof-guduud ayaa ah magaalo beereed taasoo qiyaastii 30 kiiloomitir u jirta magaalada Baydhabo, ee xarunta gobolka Bay.
October 23, 2018 In ka badan 20 qof oo ku dhimatay dagaal beeleed ka dhacay gobolka Sool